Iindaba -Iindaba ezimnandi malunga nefom yealuminium
Ukusetyenziswa kakhulu kweenkuni kulwakhiwo lweedolophu kukhokelele ekugawulweni okugqithisileyo, ungcoliseko olunzima lwenkunkuma yokwakha, kunye nomonakalo omkhulu kwindalo esingqongileyo. Ukuthandwa kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokubumba ialuminiyam kwenza ukuba ukwakhiwa kube ngcono, kukhawuleze kwaye kube noqoqosho ngakumbi, ngokuhambelana nokwehliswa kwekhabhoni esezantsi kunye netekhnoloji yokwakha eluhlaza, kwaye yinto ephambili kwicandelo lokwakha.
Sizimisele ukukhuthaza inguqu kunye nokuphucula ishishini lokwakha kunye nokubonelela ngezisombululo eziluhlaza kulwakhiwo lwasezidolophini. Iqela le-R & D elineziko lobuchwephesha beshishini elivunyiweyo kunye neengcali zolawulo ezinandipha izibonelelo ezikhethekileyo ezivela kwiBhunga likaRhulumente, zithobela i-R & D kunye nokuyila ngokutsha kweemveliso ze-aluminium, kwaye ikhuthaza ngamandla inkqubo yokutsala. Inkqubo yasekhaya yokuqala yealuminium ezotywe isetyenziswe kwiiprojekhthi eziphakamileyo eziphezulu, kwaye iphumelele imarike eyaziwa kakhulu ngabathengi.
Sibonelela ngeenkonzo zokwakha ubunzulu be-aluminium yoyilo lokwakha ukwenza ulwakhiwo lusebenze ngakumbi kwaye ludale iziphumo ezingcono ngamafomu ambalwa. Uyilo olungaphezulu kwewaka lezakhiwo kwaye usombulule ngempumelelo iingxaki zeshishini ezinje ngobude obuphezulu, izakhiwo eziphindiweyo, amagumbi angaphantsi, izakhiwo zendibano esele zenziwe, kunye neepaseji zangaphantsi komhlaba
Ukulawulwa okumiselweyo, ulawulo olungqongqo kunye nolawulo lwenkqubo nganye yokusebenza, ukuqinisekisa ukuba iimveliso zithunyelwa zingenasiphako.
Nika inkunkuma ye-aluminium, inkunkuma yefomwork yokutshintsha indawo, ifomathi efanelekileyo
Ishishini lokuphinda lisetyenziswe iAluminiyam lipasile ukuqinisekiswa kwe-ASI, isiseko sokuphinda kusetyenziswe i-aluminium, ukukhuthaza ukukhula okuluhlaza kunye nokuzinzileyo kwishishini lealuminium.
Okwangoku, iimveliso zayo kunye neenkonzo zigubungela amaphondo ali-18 kunye nezixeko kwilizwe liphela, kwaye zithunyelwa kuMzantsi-mpuma weAsia, eAfrika nakwamanye amazwe aphesheya. Ikhule ngokukhawuleza ukuba ibe yinkampani yetekhnoloji yokwakha esemagqabini.
Ngoku ngeli xesha likhethekileyo, nefuthe leCorona kwilizwe ngalinye. Sinikezela ngexabiso elikhethekileyo ukunceda intengiso yokwakha. Wamkele ngokufudumeleyo umbuzo wakho.
Metal Cuplock banikwe, Heavy Duty Ringlock banikwe, Izixhobo zeKwikstage Scaffolding, Banikwe Screw Adjustable Screw, Ringlock banikwe Izahlulo, Isibiyeli seBhendi yokuQinisa,